Umuntu ngamunye esikhathini ethile yokuphila kufanele athathe ukuhlolwa ezahlukene. It akanawo abayohlanganiswa ekuqaleni yisiphi isifo. Ibhekane le nqubo, kuyinto efiselekayo, futhi njengoba isilinganiso izifo. Kulokhu, ebukhoneni isifo, kungatholakala ukuthi isheshe itholakale, okwandisa kungenzeka ukwelashwa okufika ngesikhathi. Phakathi survey eziningi bayakhuthazwa ukuba yindoda, ezivame kakhulu segazi. Ukuzila Ukudla noma cha, njengoba azithathe wakhe - lokhu umbuzo oyithandayo nabo bonke abahlanganyela ukuvakashela umtholampilo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuze bathole imiphumela olunembile, kumelwe imithetho nhlangothi zombili. Laboratory kumele alandele inqubo nokuqoqwa kwegazi, kanti isiguli - imithetho belungiselela ukuhlaziywa.
Ukuze uthole imiphumela olunembile kakhulu futhi ugweme isidingo impindelo emtholampilo, kumele izimo ezilandelayo kuhlangatshezwane nazo:
Ukuze uyeke ukubhema esikhathini esidlule amahora amabili ngaphambi ukuhlaziya. Lokhu kungenxa imfuneko ukuthi i-nicotine kungadala spasm yegazi neuropathy, okwenza kube nzima ukufinyelela igazi emikhawulweni. Idatha ukuhlaziywa siphambane. Ngesizathu esifanayo akufanele baphuze itiye eqinile noma ikhofi phambi inqubo blood donation.
Ungakudli ukudla okunamafutha kanye notshwala usuku ngaphambi kokuhlolwa. Le mikhiqizo kungadala ukwanda igazi cholesterol. Futhi lokhu, esikhundleni salokho, sizothinta erythrocyte sedimentation isilinganiso, okuyinto kunqunywa le ukuhlaziywa.
I belungiselela ukuhlolwa igazi lethu laphela, it is hhayi Kunconywa ukuthatha kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo ezithinta igazi ekunqandeni. Uma ngesikhathi umnikelo ubhekene zokwelapha, kufanele wazise udokotela, futhi, uma kungenzeka, ukuhlehlisa usuku ukulethwa yokuhlaziya.
Akufanele silithathe kancane leli ukuhlaziywa ngesikhathi igciwane lohlobo, futhi kwaphela isikhathi esithile ngemva kwalokho. Linanincane lesikhatsi ukuthi kumelwe kudlule emva yokuthola izinsuku ezingu-7. Lokhu kungenxa imfuneko ukuthi lesi sifo sihlasela yeselula yokwakheka igazi, ngakho-ke, imiphumela iyoba olungalungile.
Ukuhlaziya igazi umunwe
Ngaphezu jikelele isithombe emitholampilo, lokhu ezohlaziywa usizo ukunquma ezinye izinguquko imingcele emzimbeni. Ngokuvamile, lokhu esigabeni sokuqala umnikelo igazi. Uma udokotela wakho kuthola yimuphi ukuphambuka kusuka kuyinsakavukela, cwaningo kuyodingeka uqhubeke ukuthola ngqo imbangela izinguquko emzimbeni.
Ngakho, ngaphandle jikelele isithombe yomtholampilo, igazi umunwe icacisa:
ezingeni elithwala umoya-mpilo emzimbeni;
khona izifo eziningi (webhaktheriya noma viral);
amazinga kashukela egazini.
Lezi zinombolo zingashintsha ukusetshenziswa ukudla okuthile, umsebenzi ngokomzimba nophuzo oludakayo. Yingakho lo mbuzo, "CBC - esiswini esingenalutho noma cha" akuyikuma. Uma uya ukuba unikele ngegazi kusukela umunwe, kufanele adle okungenani amahora angu-8 ngaphambi inqubo. Esimeni lapho amazinga kashukela egazini elinganisiwe, kutuswa ukuba nidede ezinkanukweni hhayi kuphela ukudla kodwa futhi kusukela amanzi ngisho ushingamu.
Ukuhlaziya igazi umthambo
Le ndlela wegazi amasampuli kancane kancane esikhundleni ngokuphelele owokuqala. Kuze kube manje, ephelele kakhulu segazi zingafundwa hhayi kuphela isithupha, kodwa futhi kusukela emthanjeni. Kule ndlela yokugcina Aya ngokuya ethandwa kakhulu, njengoba kunikeza egcwele kakhulu isithombe emtholampilo.
Ngakho, uma bephumelele igazi, ungathola imiphumela eminingi, okuyinto ekahle kakhulu.
Ngakho, ekuhlaziyweni egazi emithanjeni zizosetshenziswa uma ufuna ukuchaza:
wakhe iqembu igazi kanye RH isici (inkomba kungatholakala futhi ngesikhathi ukuhlaziya umunwe);
khona izifo, zocansi;
ezingeni isimila iziphambano.
Kuyaphawuleka ukuthi ngaphambi kokubhala isivivinyo igazi umthambo zonke lezi izinkomba, ungakwazi alengayo uzame. Ukukhethwa iyona ukuhlaziywa TTG futhi hormone parathormone. Ngaphezu kwalokho, uma ufuna i-HIV, i-hepatitis noma ugcunsula, odokotela kakhulu belulekwa ukuba unikele ngegazi kuphela esiswini esingenalutho.
igazi Nemimoya: indlela yokunquma
Phakathi izifundo eziningi eziphakamisa imithi yesimanje imele okulumba kwegazi. Le ndlela fecal, okwenza sokwembula ukopha ezifihliwe ezingxenyeni ezihlukahlukene pheshana emathunjini. Lena test kubaluleke kakhulu elabhorathri ukuxilonga ekuqaleni izifo ezihlukahlukene sina ezingeke ngenye ukutholwa.
Ukuze uthole imiphumela ezinokwethenjelwa, kumele ngaphandle kusukela ekudleni inyama, inhlanzi, imifino eluhlaza utamatisi ngaphambi ngokubeka okulumba kwegazi izinsuku ezintathu ngaphambi ukulethwa komsebenzi. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba ayeke ukusebenzisa zonke laxatives, okungase kuthinte emathunjini. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukulungiselela lesifanele incike ukunemba umphumela ukuhlaziywa, futhi ngaleyo ndlela uphethwe yini.
Ukuhlolwa kwegazi ngesikhathi sokukhulelwa
Ilinde ingane - lesi yisikhathi yaba emnandi kunazo zonke ekuphileni sowesifazane. Nokho, ngaphandle nje umuzwa elithabisako umsuka wokuphila, inkathi libhekene isidingo uvakashelwa njalo ngaphambi kokubeletha.
Nge zonke ezihlukahlukene cwaningo, okufanele kuthathe umama okhulelwe lonke ukukhulelwa, ephelele kakhulu segazi futhi urinalysis njalo ezahlukene. Ukuze ukukhulelwa lochwepheshe udinga ukuthatha kubo kaningi njengokuthanda kanye ngenyanga. Kulokhu, uma umchamo ingalandwa ekuseni ngemva nje uvuka ke umbuzo "CBC - esiswini esingenalutho noma cha," impikiswano ngokwanele.
Ukukhulelwa - kuyinto inkathi lapho owesifazane akufanele kudle njalo calories ikhefu isikhathi eside phakathi ukudla kungaba nomthelela omubi kwezempilo wakhe. Ngakho-ke, odokotela bangase babe ibhulakufesi okuxekethile phambi blood donation. Ngokuphathelene amanzi, ungakwazi uphuze ngaphandle kwemingcele.
Qedela segazi ezinganeni
Izingane - kulesi sigaba iziguli, esidinga ukuba indlela ekhethekile. Uqondeni ukuhlolwa igazi e ingane? Kuyinto uphethwe oluphelele, okuyinto ikuvumela ukuba kutholakale inkambo ekukhuleni kwengane nokutholakala kokubili isifo kanye izimfanelo ngoba.
Kulesi inqubo ukulungiselela incike yobudala lesiguli kancane. Uma ingane akuyona unyaka ukulethwa ukudla ukuhlolwa kungaba kungabaza. Isikhathi kubalulekile ukuba sikhuthazele kusukela ukudla amahora amathathu. Uma kuvela isikhathi eside - ezinhle, kodwa isikhawu amahora amathathu liyadingeka.
Izingane kusukela kwabaneminyaka engamashumi nangaphezulu kakade kufanele sizame ukuchaza ukubaluleka ukuhlaziywa okulungiselela inqubo. Ukuthola igazi seziguli ezisencane ke ngokuvamile uhambisana nemizwelo emibi, okungaholela yokujama tsi negazi, okuyinto ngokulandelana, ngeke izinkinga inqubo iqoqo yayo.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuzama ukudala isimo sengqondo esihle ezinganeni, lapho ngeke wesabe odokotela kanye ubuhlungu ngangokunokwenzeka. umsebenzi okungokomzimba akufuneki ukuba ususe usuku phambi emtholampilo, futhi kufanele asuswe Ukudla ukudla okusezingeni eliphezulu amafutha. Ngqo ngesikhathi langempela igazi iqoqo uqinisekile ukuphazamisa ingane. Lokhu kungenziwa noma ngokukhuluma noma ithoyizi ozithandayo. Ukuhambisana lezi ziqondiso ipha impumela enokwethenjelwa kakhulu ngaphandle ukucindezeleka kwengqondo.
Lapho ungathatha ukuhlolwa igazi?
Uma udinga ukuba banikele ngegazi, une choice emkhatsini zezempilo zomphakathi isikhungo ningabakaKristu okuyinto ngokwendawo kanye isikhungo sezokwelapha yangasese. Konke kuncike izifiso zakho namakhono zezimali.
Kuze kube manje, kukhona laboratories eziningi eyimfihlo babe imishini yamuva. Ngesikhathi esifanayo, hhayi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela lemali edingekayo luhlolo. Kulokhu, ungaya umtholampilo, okuyinto isendaweni indawo ohlala yakho.
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe ukuhlolwa kwegazi
Labo abafisa ahlolwe yezokwelapha ngizibuza kwegazi kangakanani. Impendulo yalo mbuzo kuxhomeke ezicini eziningana ezifana ukukhetha futhi uhlobo ukuhlaziywa laboratory. Uma kukhona inqubomgomo umshwalense wezokwelapha ayimpoqo, ukuhlolwa igazi emitholampilo isimo wenza mahhala. Lokhu kusebenza nezikhungo zezokwelapha ise indawo ohlala yakho. Uma ngasizathu simbe ufuna ukuba bahlolelwe kwenye umtholampilo isimo, khona inqubomgomo sizonikeza ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala.
Ngokuphathelene laboratories yangasese kanye nezikhungo zezokwelapha, lapho ukubaluleka ngayinye ukuhlaziywa incike uhla amanani ukuthi usungula isikhungo. Ngokwesibonelo, intengo ka emitholampilo igazi ukuhlaziywa kuncike ophenyweni ukujula. Izindleko kuhluka ruble 150 kuya 650. Inani ukuhlaziywa kwamakhemikhali umthambo ngenxa uhlobo ukuhlaziywa, uma amazinga omzimba athile amaphoyisa ayaphenya ngalolo daba, izindleko ngokuvamile ruble 150 kuya ku-300. Amanani cwaningo ku amahomoni isimila nakomaka uqale engama-ruble angu-300. Icacisa khona igciwane lohlobo kanye nenani masosha omzimba umzimba ruble 400 futhi kuncike eyinkimbinkimbi zokukhwabanisa. Kulokhu, ukulethwa eziyinkimbinkimbi kwegazi ngoba khona noma yiziphi izifo, ngokuvamile konga. Kunoma ikuphi, ngokukhetha indawo lapho ofuna ukuba banikele ngegazi, kumele ayejwayele amasevisi anikezwa futhi izindleko zabo, ukuze ukwazi amanani ngqo kufanele akhokhele inqubo.
Ngakho, lo mnikelo igazi - inqubo okumele zenzeke njalo wonke umuntu ukucabanga ngempilo yabo siqu. Indlela ukuthatha ephelele kakhulu segazi, ukuzila ukudla noma cha, kuncike empilweni, izinjongo inhlolovo nezifo echaziwe. Kunoma yikuphi, uma udokotela uqashe wena unikele ngegazi, udinga ukuba acacise ukuthi izidingo zokuqeqeshwa ukuze uyihlaziye ethize.
Kuthiwani uma simile izinwele on the imilenze?
Ramada Liberty Ihhotela 4 * (Monastir, Tunisia) izithombe kanye nokubuyekeza